एन्जाइटी र डिप्रेसन कसरी थाहा पाउने ? - Morning Bell
१५ असोज २०७७, बिहीवार
एन्जाइटी र डिप्रेसन कसरी थाहा पाउने ?
Reporter	काठमाडौं	भदौ १४, २०७७
एन्जाइटी र डिप्रेसन फरक रोग हो । यसलाई एकै खाले रोगमा वर्गीकरण गर्न मिल्दैन । उपचार पद्धतिमा पनि फरक हुन्छ । मुख्य बुझ्नुपर्ने कुरो के हो भन्दा कुनै एक प्रकारको एन्जाइटी विकसित भएर डिप्रेसन शुरू हुने हो । यी दुवै रोगको कारण प्रायः एकै हुन्छ । रोगको धेरै लक्षणहरू पनि उस्तै हुन्छ । यी दुवै रोग न्युरोट्रान्समिटर फंग्सन अर्थात् काम परिवर्तन हुँदा विकसित हुने हो । न्युरोट्रान्समिटर डिसअर्डर हुँदा सेरोटोनिंन भन्ने रसायनको कमी हुँदा यी रोगहरु विकसित हुन्छन् ।
डोपामाइन र एपिन्याफ्रिन नामक रसायनको भूमिका पनि उत्तिकै हुन्छ, एन्जाइटी र डिप्रेसन हुनको लागि । अब दुवै रोग एकै कारणले हुने हुँदा लक्षणहरु उस्तै हुनु र एन्जाइटी हुँदा डिप्रेसन विकसित हुनु अनि डिप्रेसन हुँदा कुनै–कुनै प्रकारको एन्जाइटी विकसित हुनु सामान्य नै हो ।
एन्जाइटी भएको व्यक्तिलाई सबभन्दा डर मर्नदेखि लाग्छ, जब एन्जाइटीले आक्रमण गर्छ अनि उसलाई भविष्यको चिन्ता हुन्छ । कतै म मर्छु कि ? कतै मलाई हृदयघात हुन्छ कि ? जीवनदेखि आश मरेको हुँदैन र मर्नदेखि अत्यधिक डर लाग्छ । एन्जाइटीले आक्रमण गर्नेबित्तिकै अस्पताल जान आग्रह गर्छ । बिरामीको यो प्रकृति अथवा स्वभाव एन्जाइटीले आक्रमण गरेको बेलामा मात्र देखा पर्छ र बिस्तारै यो १ घण्टापछि आफैँ सामान्य हुन्छ ।
अर्कोचोटि एन्जाइटीले आक्रमण नगरुन्जेल यस्तो समस्या देखा पर्दैन तर उसलाई पहिला परेको समस्याले चिन्तित बनाउँछ र बिस्तारै एन्जाइटीले आक्रमण नगर्दा पनि डिप्रेसनका सामान्य लक्षण शुरू हुन थाल्छ । ठीक विपरीत डिप्रेसन भएको व्यक्तिलाई मर्नदेखि डर लाग्दैन, झन् आत्महत्या गर्न मन लाग्छ । जे गर्दा पनि व्यक्तिले आफ्नो भविष्य अन्धकार मात्र देखिरहेको हुन्छ । यो समस्या डिप्रेसन भएको व्यक्तिलाई निरन्तर भइरहन्छ । एन्जाइटीजस्तो १ घण्टासम्म मात्र लक्षण देखिने होइन कि निरन्तर आत्माग्लानि भइरहन्छ ।
करिब–करिब एन्जाइटी र डिप्रेसनको फरक यही नै हो । अझ एक वाक्यमा भन्दा, डिप्रेसन आफैँमा एन्जाइटीको विकसित रुप हो तर एन्जाइटीचाहिँ डिप्रेसन होइन । यसैले एन्जाइटी पहिचान गर्न सके डिप्रेसनको उपचार गर्नुपर्दैन र एन्जाइटीको मात्र उपचार गर्दा हुन्छ ।
र डिप्रेसन कसरी थाहा पाउने ?
१४ भदौ २०७७, आइतवार १२:४० बजे प्रकाशित
जनतासँग सरकारको अपिल– सिक्का पैसा खर्च गर्नुस्
दार्चुलामा सरुवा भएर आएका प्रहरीमा कोरोना पुष्टि
सम्झनाका हत्या आरोपी राजेन्द्रले स्वीकारे अपराध
सुदूरपश्चिममा एकैदिन १८४ जनामा संक्रमण
लिम्पियाधुराको क्षेत्रफल समेटिएको पुस्तक परिमार्जन भएन, राखियो गुपचुप
देशभर १५५९ जना कोरोना संक्रमित थपिए, सात जनाको मृत्यु
अस्पताल भर्ना गरेको केहीबेरमै संक्रमितको मृत्यु, अरु रोग थिएन
विषाक्तमिश्रित स्यानिटाइजर बजारमा छ्यापछयाप्ती
रेलवे कम्पनीमा १२९ जना माग, ३२ हजारको आवेदन
‘कोरोना भाइरस नक्कली’, इटालीमा प्रदर्शन